Takestali na-ewere usoro draconian megide coronavirus
Location: Mbido » Ịdee » Safety » Takestali na-ewere usoro draconian megide coronavirus
by Elisabeth Lang - pụrụ iche na eTN
13 min gụọ
dere Elisabeth Lang - pụrụ iche na eTN
Izu gara aga, Milan, Italy, kwadoro otu n'ime ụdị ejiji egwuregwu kachasị anya na afọ. Úkwù anyị pere mpe, ubu buru ibu maka mgbụsị akwụkwọ ọzọ, nke a bụkwa ihe anyị chọrọ. N’izu gara aga, ihe niile mara mma, ọnụego ụlọ nkwari akụ rịrị elu, ndị uwe na-acha uhie uhie juputara n’okporo ámá. Ọ bụ ezie na ndị ahịa kachasị mkpa na-ewepụta ihe karịrị pasent 30 nke ahịa maka Prada, Versace, Dolce Gabbana, na ihe ndị yiri ya, ndị na-azụ ahịa China na ndị na-ese ihe furu efu.
A ụbọchị gasịrị mgbe akụkọ na-emenye ụjọ na coronavirus, Giorgio Armani jidere ihe ngosi ejiji ya na Sọnde n'otu ọnụ ụlọ na-adịghị, nke na-asọgharị gburugburu ụwa.
Milan si fashionable ụlọ oriri na ọ wereụ wereụ e gbaa akwụkwọ ọnwa tupu oge. Ugbu a, Michelin Star chefs nke Milan dị ka Cracco na Berton kwuru na azụmahịa agbadaala karịa 80 pasent n'ime naanị ụbọchị ole na ole.
Naanị otu izu gara aga, Enit Onye isi ala Giorgio Palmucci kwuru na N'ajụjụ ọnụ ya na Il Sole 24 Ore mgbe a jụrụ ya banyere coronavirus, "you naghị enwe ihe ize ndụ nke ịbanye na ịkagbu akwụkwọ na mbata?" Iji zere ihe ize ndụ a “ọ dị oké mkpa iji zipu ozi ahụ n'akụkụ ụwa niile na Italytali bụ obodo nchekwa. N'aka nke ọzọ, "ka o kwuru," anyị so na mba ndị ewerela ụzọ kwesịrị ekwesị karịa ọtụtụ ndị ọzọ na coronavirus. ”
Nke a agbanweela ngwa ngwa
N'ihi coronavirus, ọnụ ọgụgụ nke ndị njem na-abata adabaala, kwuru Bernabe Bocca, Onye isi oche nke Hoteltali Federationtali Federationtali, na mkparịta ụka ndị nta akụkọ na Rome.
“Anyị nwere nchegbu dị ukwuu. Ruo ụbọchị ole na ole gara aga, ọrịa a anaghị emetụta Italytali.
“Febụwarị na Machị bụ ọnwa na-arụsi ọrụ ike - na nke megidere ihe ị nwere ike iche, anyị anọghị n'oge-oge: maka mpaghara ụfọdụ nke mba a, ọ bụ oge ọrụ siri ike. Dịka ọmụmaatụ, m na-eche maka emume, izu ụka ọcha, njem ụlọ akwụkwọ, na mmemme dị mkpa. Anyị na-ekwu maka nde ndị njem dị 14.5 na-eweta nde 40 n'abalị. " (Dịka ọmụmaatụ, na Venice naanị, a na-anabata ndị ọbịa 3 n'oge oge Carnevale).
Bocca kwenyere na ọtụtụ ịkagbu na-abịa ugbu a, mana mgbe ọ bụla enwere ike, ndị nwe ụlọ ga-anwa ike ha niile iji chọta nkwekọrịta ha na ndị ọbịa ha - dịka ọmụmaatụ inye akwụkwọ ikike maka oge ọzọ, ọbụlagodi na usoro iwu onye ahịa agaghị enwe ikike ya .
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ime ihe ngwa ngwa iji nyere aka azụmaahịa n'ofe mba ahụ tupu ogologo oge nke ịkagbu bụ nke a gbanwere na tsunami, na-amanye ọtụtụ ụlọ ọrụ iji belata ndị ọrụ ma ọ bụ ọbụna mechie ụzọ ha, "ka ANSA dere.
Hastali debara aha ọrịa coronavirus dị 25% n'ime awa 24, yana ọrịa ahụ ka dabere na ntiwapụ na mpaghara abụọ dị n'ebe ugwu - Lombardy na Veneto. Mana ikpe ole na ole apụtala ugbu a na ndịda Italytali kwa.
Gọvanọ Lombardy Attilio Fontana tinyere onwe ya iche mgbe otu onye otu ya nyochachara nke ọma. Na facebook o kwuru na ya na ndị otu ya anwalela ihe na-adịghị mma ugbu a mana ha ga-anọpụ iche maka ụbọchị 14.
'Stù Ndị Njem Nleta Asstali nke Assoturismo kwuru na ntinye akwụkwọ ndozi ọnwa March na-agbada site na least 200m (£ 170m; $ 219m) n'ihi nje ahụ. Rome na-ahụ kagbuo 90% nke ndozi, 80% na Sicily. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ ahụ na-ekpuchi uru nke njem ndị a kagburu na nnabata yana anaghị agụnye enweghị mmefu njem nleta na ihe ndị njem nlegharị, njegharị ụgbọ ala, na tagzi na-ewere, yana ụlọ mmanya, ụlọ nri, na ịzụ ahịa na Itali niile.
Gịnị bụ ọnọdụ Italytali ugbu a?
E mechiela ụlọ akwụkwọ, mahadum, sinima, na ebe a na-edebe ihe mgbe ochie ma kwụsị ihe omume ọha na eze. Emechiri Milan's Duomo kemgbe Mọnde, yabụ na Milan bụ opera ụlọ a na-akpọ La Scala. A na-egwu egwuregwu bọọlụ n’azụ ụzọ n’ime ọgbọ egwuregwu.
N'isi ụtụtụ Sọnde, ọsọ a na-abanye n'ime ụlọ ahịa na-amalite ma na-ahapụ shelf efu. Enweghị ohere ịchọta ọgwụ na-egbu nje ọ bụla, a hụkwara ndị mmadụ na Bologna ka ha na-akwagharị ụgbọ ala ahịa banana.
Milan bu ike nke aku na uba Italy. Ma na Mọnde a, e zigara ndị ọrụ banki Milan na kọmputa ha iji rụọ ọrụ ebe ahụ.
Milan nwere Chinatown dị omimi nke ndị bi na 30,000 (ebe ndị China bi na Lombardy gbara 80,000 gburugburu). Ya "Highstreet" Via Sarpi bụ ebe ndị cometali na-abịa maka kwụ n'ahịrị nri ehihie maka iwepụ nke kacha mma ravioli na obodo nke ụmụ nwanyị China na-akwadebe ha na onye ọ bụla na-achọ ka ndị ahịa jupụta. A na-ahụta ebe a ka ọ dị mma ma nwee obere okporo ụzọ mechiri emechi, nke mere ka ọ dịkwa mma maka ezinụlọ ndị Italiantali ibi ebe ahụ.
Buru ụfọdụ ihe m hapụrụ na onye China ịkwa akwa a ọnwa ole na ole gara aga ma na a dị iche iche nke Milan, O juru m anya ịhụ nkịtị ọgba aghara nke ákwà na-atụkwasị na tebụl na ọtụtụ narị akpa na-ẹmende. Oge a ọ dị iche - dozie. Mụ nwoke abụọ nọdụrụ n’ihu igwe ịkwa akwa a na-emetụbeghị. “Olee ebe nwunye gị nọ?” Ajụrụ m. “Na China. Ma ọ pụghị ịlaghachi; enweghị ụgbọ elu na obere olile anya ọ ga-abịa n'oge adịghị anya, "ka di ahụ kwuru. “Enweghị azụmahịa ọ bụla maka anyị ugbu a na ọ nweghị ndị ahịa. Nke ahụ bụ tupu Milan abanyela. ”
N'ajụjụ ọnụ a na telivishọn, Onye isi obodo Milan, Giuseppe Sala, na Tọzdee gara aga (Italytali nwere ikpe 19 nke nje ahụ) kwupụtara ọkwa Milan kachasị mkpa nke International Furniture and Design Fair (Eprel 21-26, 2020) ga-ahụ nkwụsị nke ndị ọbịa 33,000 ndị China Milan nke pụtara ọnwụ nke nde euro 120. Ka ọ dị ugbu a, International Furniture and Design Fair ka eyigharịrị rue June 16-20, 2020.
N'ụtụtụ Fraịde, ọnụọgụgụ ahụ gbagoro na ọrịa 40 ọkachasị na Lodi, 60 km ndịda nke Milan. Ka ọ na-erule anyasị, ọ ghọrọ ebe etiti Epic na fortali maka ntiwapụ coronavirus.
Emechiela obodo iri na otu n'etiti etiti ọrịa ahụ - ebe obibi nke mmadụ 55,000. Enwere egwu na ntiwapụ ahụ nwere ike ime ka intotali kwụsị ịlaghachi azụ n'ụzọ akụ na ụba. Onye ntaakụkọ BBC Mark Lowen nọ na Milan kwuru na ụjọ bụ ihe kpatara ụlọ oriri na ọ emptyụ emptyụ ndị dị na obodo na ọtụtụ ịkagbu họtel.
Gbọ okporo Italiantali Italiantali rụrụ ọrụ ngwa ngwa na Sọnde, 23 Febụwarị, mgbe FStù FS (Ferrovia dello Stato) kwupụtara na ha arụgoro "usoro pụrụ iche iji hụ nchekwa nke ndị njem." Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ tinyere ndị na-ehicha aka na ụgbọ oloko, kesaa ndị na-arụ ọrụ mkpo na uwe aka, mụbaa nsị na-egbu nje, ma nye mpempe akwụkwọ ozi sitere na Ministry of Health.
Ndị njem nwere ike ịkwụghachi nkwụghachi njem rue Machị 1 nke amụbaala ugbu a - maka ịkwụghachi tiketi ụgbọ oloko bara uru maka FRECCE, Italo, Intercity, na ụgbọ oloko mpaghara dịka ego bara uru maka otu afọ. Zọ nkwụghachi ụgwọ: niile na-aga ma si na ebe ndị emetụtara Northern Northern.
Wednesdaybọchị Wenezdee gara aga, Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) kwuru na nke mbụ ya bụ nje na-agbasa ngwa ngwa na mpụga China, ebe o bidoro. N’ụwa nile, ihe karịrị mmadụ 80,000 n’ihe dị ka obodo iri anọ bu nje nje coronavirus ọhụrụ, nke pụtara na Disemba. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-anọgide na China. Nke a na-esote South Korea (40) na (tali (karịa 3,300). Mana ihe kachasị dị ka otu izu zuru oke na ọrụ okpukpe, a ga-emepe akụkụ nke Duomo na Milan ọzọ, ụlọ akwụkwọ ga-emepe ọzọ na Mọnde na-esote na Machị 900.
Design ngwá ụlọ Health Hotel Anyanwụ awa 24 Italy Korea Lombardy Michelin Milan Organization Rome South Korea Tourism World Health Organization
Lufthansa Coronavirus Mmelite: Mbelata mbelata nke ụgbọ elu
Onye isi oche otu APO họpụtara ka ọ bụrụ ndụmọdụ ndụmọdụ nke...
Jumeirah Group mepere ebe ezumike ọmarịcha ụlọ na Bali
St. Regis San Francisco na-ekpughe ọmarịcha nhazigharị
Nkewa ahịa ahịa agba Titanium dioxide...
Akụkọ ọhụrụ: Na-amata mmalite Alzheimer's...
Ụgbọ elu Alaska na ndị mmekọ oneworld kwagara ọhụrụ ...
rere! Twitter na-anabata onyinye $44 ijeri n'aka Elon Musk
EU: Enweghị euro ọzọ maka Russia
A na-adụ ọdụ ka azụmaahịa na ebe aga ịbanye WTM...
Ọgụgụ ọbara mgbali elu ka mma n'ụlọ ma ọ bụ dọkịta ...
Ahịa Ngwa Intrauterine Insemination (IUI) bụ ...
LATAM ga-ewepụ ikuku CO2 na Latin America…
Njem nlegharị anya Thai na-ezube ịkagbu Thailand Pass maka ọhụrụ…
Etu ị ga-esi kwalite ibe gị na Instagram na-ejighi ego...
Azụmahịa ntụ ọka ọka Outlook kpuchie atụmatụ azụmaahịa ọhụrụ...
Tuvalu na-akwado ịkụ azụ na isi nri kwa afọ nke mbụ...
Ndị njem nlegharị anya na-aga Hawaii mana ha na-emefu obere
Qatar Airways na ndị ụgbọ elu Malaysia
Kedu ka njem nlegharị anya na America si gbakọọ?
Minista Bartlett na Canada maka “Jamaica 60” dị mkpa…
Nri Ọsọ Ọhụrụ Na-agbasawanye yana Ọpụrụiche na...
Mgbọ gbara ụjọ na ọdụ ụgbọ elu Cancun abụghị égbè
IATA: Agha na Ukraine na Omicron na-atụ ibu ụgbọ elu
Elisabeth Lang - pụrụ iche na eTN
Elisabeth anọwo na-arụ ọrụ na azụmahịa njem mba ụwa na ụlọ ọrụ ile ọbịa ruo ọtụtụ iri afọ ma na-enye aka na eTN ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20. O nwere netwọkụ zuru ụwa ọnụ ma bụrụ onye nta akụkọ njem mba ofesi.